3d Madbacadaha, Mashiinka Mashiinka, 3d Xardho - Ecubmaker
TOYDIY 4in1 3D Daabacade
Casharro Video ah
EcubWare 4.2.1 Buugga
4 Module Waxqabad La Beddeli Karo
Xawaare Sare Daabacaad & Qaddar Daabacaad Sare
Ku xardho Qaabab Kasta, Sawir, Naqshad Qalabka Kala Duwan
TOYDIY 4-in-1 3D Daabace
Daabacaad 3D laba-midab ah
Qashinka Filament Ka Yar & Isku Darka Midab La'aanta
Carve, oogada dusha sare ee walxaha kala duwan
8 Cusbooneysiin Si Aad U Hesho Baahiyahaaga Aan Xaddidneyn
Waxaan haynaa Waxyaabaha Hordhaca ah ee Aad Rabto
Afar-lakab oo Heerkulka Magnetic Platform ah
Heerka otomaatiga ah
4-in-1 Barnaamijka Kala jarista
180x180x180 Cabirka Daabac
Muxuu Daabacaha TOYDIY 4-in-1 3D Sameeyaa
Hawlo badan, Fursado badan oo Sahamin ah
waxaa qoray EcubMaker
waxaa qoray Edward Scott
Spiderman 3D Saamaynta
waxaa qoray Mark Johnson
waxaa qoray Williams
Waxaa Jecel Beel Ka Mida 5000+ Users
Ka dib markaan wax ka akhriyo madbacadaha kale oo aan awoodo inaan isticmaalo qaar ka mid ah, waxaan dadka u sheegayaa tani waa tan ugu horreysa ee daabacaadda ugu fiican ee 3D ee la helo oo wax la barto. Ka dib u gudub daabacaha weyn haddii dhismuhu aad u yar yahay. mishiinkan aad u badan.
Aad uma weynahay inaan barto waxyaabo cusub!
My ToyDIY 4 ee 1 ayaa si weyn u shaqeeya!
Hubka loo yaqaan 'GoPro mount hubka' ayaa xoogaa jilicsan oo leh 15% buuxi sidaa darteed waxaan ugu dhajiyay ilaa 50% ... sidoo kale kor u kaca feylka dabka ilaa 210 C.
Waxaan bartay inaan joojiyo daabacaadda oo cajaladda dusha hoose ka duub sida caymis kordhay u adhesion sariirta.
Laser-ka ayaa si dhab ah u qurxiya gurigeyga oo ka sameysnaa iPad-ka.
Waa kuwan qaar ka mid ah aaladaha yaryar ee aan qorsheeyay oo aan daabacay: clips xarigga fidinta oo lagu dhejiyo dusha hiitarka. Janjeeri cusub ayaa u taagan kumbuyuutarkeyga. Saxankaas qosolka badan ee daawadaya waa murqo xanuun iyo murugo yareynta, waxaad ku duugaysaa dhibic xanuun oo leh gees saxan saxan.
Waxaa loo baahday sanduuq koronto wareegsan, kaliya daabac mid. Daabace daabac daabacan oo hal midab ah adoo iskiis u raraya isla markaana soo dejinaya feylka loo baahan yahay. Saldhigga birlabta waa mid cajiib ah. Wax walba waxay ku kala baxaan iyada oo aan dadaal lahayn.
Maaskaro wajiga ayaa diyaar ah! Ku faraxsanahay inaan sameeyo wax waxtar leh waqtigan.
Barnaamijka leysarka cusub wuxuu sameeyaa gubasho aad u fiican oo nadiif ah! Waad ku mahadsan tahay barnaamijka la hagaajiyay!
Beerta Goldens Junkyard
Si dhakhso leh ayey ku timid oo waa la qiimeeyay. Aad u fududahay in la isticmaalo wax walbana aad baan u faraxsanahay waxaan u maleynayaa in laga yaabo inuu iga maqnaado hal madbacad oo 3d ah waxaana jeclaan lahaa inay jiraan waxyaabo badan oo qoto dheer oo ku saabsan barashada marka loo eego dhinaca software-ka waxyaabaha. Waxaan kudarey dib u eegiskeyga YouTube-ka sida aad ubogto madaxa lazerku wuxuu qabtaa shaqo cabsi leh.
Dhagayso !! In kasta oo kani yahay Printer-kii ugu horreeyay ee 3D ah - Lama kulmin arrimo badan oo aan kaga shaqeeyo. Kaliya qaado dhowr saacadood si aad wax uga ogaatid 4-ta hawlood mid mid. La dhammeeyay dhammaan daabacaadda tijaabada ee lagu bixiyo kaarka SD. Isku soo wada duuboo waxaan dhihi karaa waa aamusnaan cajiib ah.
Kahor intaanan u gudbin faahfaahin dheeraad ah waxaan doonayay inaan xuso - adeegyadooda macmiil ayaa fiicnaa. Waxaan la xiriiray iyaga oo wareersan intii lagu jiray qashin qubka CNC. Waxayna kaga jawaabaan daqiiqad gudahood faahfaahinta saxda ah. Taasi waa shaqo weyn!
Illaa iyo hadda waxaan tijaabinayay daabacaadda caadiga ah waxaanna nus ka socdaa daabacaadda 30 saacadood ah. Daabacaadii ayaa si dhakhso leh uga timid amazon, oo si fiican ayaa loo soo buuxiyay. Waxba kuma dhicin markii aan furay sanduuqa oo ay fududahay inaan kala baxo. Waxyaabaha waxaa lagu daboolay xumbo si looga hortago wax dhaqdhaqaaq ah, madaxyadoo dhanna waxay ku jireen duubo xumbo. Way fududahay in la furo sidoo kale.
Dhowr usbuuc ka hor saaxiibkeygii ugu fiicnaa Molly bisadu way dhimatay. Waxaan doonayay inaan xasuus yar u sameeyo iyada sidookale waxaan adeegsaday dhamaan sedexda shaqo ee ToyDIY.
Waxaan awooday inaan u adeegsado daabacadan qaanada sanduuqa iyada oo aan wax dhibaato ahi ka jirin. Waxaan tan u iibsaday bishii Febraayo ee sannadka 2020 si aan ugu isticmaalo mashaariicda dugsiga. Waxba kama ogeyn waqtigaas daabacaadda 3D, laydhka laysarka ama CNC xardho.
Waxaan ku haystay arrin bil ah ama wax la mid ah madaxa daabacaadda 3D waxaana si dhaqso leh loogu diray beddel.
Shirkaddu si dhakhso leh ayey uga jawaabtaa su'aalaha iyo arrimaha inta lagu jiro maalinta shaqada ee Shiinaha, sidaa darteed dib u dhac yar ayaa ku yimid waqtiyada jawaabta. Laakiin si dhakhso leh ayey uga jawaabaan iyagoo tixgelinaya waqtiga kala duwan.
Madbacad aad u fiican! Illaa iyo hadda uun baa la daabacay hal fayl, laakiin sida fiidiyowyada oo kale, buuxi faylka oo riix badhanka. Marka xigta waxaan isku dayi doonaa shaqada laser-ka.
Waxaan marwalba rabay daabacaad 3-in-1 ah (oo leh daabacaadda FDM, xardho CNC, iyo xardho laser) laakiin inta badan mashiinadani aad ayey qaali u yihiin. Marka markaan helay daabacaad 4-in-1 ah oo aad uga jaban kuwa kale, waxaan go'aansaday inaan aado oo aan arko aragtida mashiinka. Aadna waan ugu faraxsanahay iibsashadayda.
Daabacaha 'Ecubmaker 4-in-1 Printer' ayaa si qurux badan u baakadeysan. Waxaa jira sanduuqyo badan oo yaryar, oo calaamadeysan gudaha sanduuqa weyn- gudaha sanduuqyadan waxaad ka heli kartaa 4 qalab oo madax ah, feylka, fiilada haysa, iyo qalabka / qaybaha. Gudaha sanduuqa weyn waxaad ka heli kartaa jirka daabacaha, horeyba isugu soo ururay. Daabacahani wuxuu ubaahanyahay isku imaatin yar - waxa kaliya ee lagaa doonayaa waa inaad ku lifaaqdo madaxa qalabka lagama maarmaanka ah oo aad bilowdo daabacaadda! Kahor adeegsiga daabacaha, waxaan doonayay inaan si qoto dheer ugu fiirsado madbacadda iyo qaabkeeda.
Isticmaalka mashiinkan waa badan yahay. Taasi waa sababta aan u jeclahay 3DPrin. Uma baahni inaan ka walwalo 4-ta shaqo ee ay hadda hayso. Tayada shaqooyinkaasina runtii aad ayey u wanaagsan yihiin.
Astaamaha isku dheelitirka otomaatiga ayaa wax badan iga caawiya helitaanka dhibaatada daabacaadda. Barxadda waligeed ma kululaaneyso sababtoo ah tikniyoolajiyadda kuleylka qaadaysa. Marka waxaan si sahal ah u soo bixi karaa 3D Daabacaaddayda isla marka aan dhammeeyo ka dib.
Mid ka mid ah waxyaalaha kale ee muhiimka ahi waa, uma baahna wax is urursi ah, mashiinkeeda isku-dhafan. Maalmahan waxaa jira mashiinno yar oo bixiya nidaamka noocan ah.
Barnaamijka loogu talagalay naqshadeynta waxay bixisaa, sidoo kale waa mid aad u hodan ku ah maaddada. Waxaan si fudud ugu tafatiri karaa ama ku qaabeyn karaa qaabkeyga barnaamijka 'ecubware software'.
Waxaan kugula talin doonaa qof walba inuu iibsado mashiinkan, maadaama uu yahay mid aad u jaban adoo isbarbar dhigaya waxyaabo badan oo horumarsan iyo shaqooyin.
Shaqo weyn! Wax walba si fiican ayey u yimaadeen sidii loo xayaysiiyay. Ilaa hadda wax badan baa la xardhay Laser oo runtii jecel saamaynta mashiinkan yar. Waxaan keenay xoogaa xoor ah qaanso roobaadka kahor intaan la daabicin daabacahayga. Markii ugu horreysay isticmaalku wuxuu helay natiijo wanaagsan. Waxaan rajeynayaa inay jiraan waxyaabo badan oo la ogaan karo oo wax laga baran karo.
Raadinta daabacaad 3d si aad ugu iibsato dhalashada wiilkayga. Qaado dhowr maalmood inaad go aansato ugu dambeyntiina waxaad keentay 4in1. Runtii waa u qalantaa! Waxaan shaqeeyay dhowr toddobaad si aan u tijaabiyo xoogaa daabacaadda 3d ah iyo leysarka qaar ka mid ah qaanso qoryo ah. Waxaan ka helay laser-ka inuu yahay mid aad u xiiso badan in la isticmaalo, inkasta oo aan u daabacay daabacadeyda garaashkeyga si aan u helo difaac dheeri ah!
Waxaan ku qabtay mashruucii iigu horeeyay ee Toydiy 4in1. La daabacay dhowr qaybood oo la isku soo wada ururiyey. Inkasta oo xoogaa guuldaradu ay isku dayeen sababo la xiriira dejinta, laakiin wadahadalka yar ka dib markii la taageeray waa la hagaajiyay. Guud ahaan waan jeclahay madbacadan.
Ecubmaker Samee shiraac si ay u fuliso riyada kuwa sameeya. Maaddaama ay tahay mid ka mid ah shirkaddii ugu horreysay ee horay u socota si ay u horumariso 3D-da wax-qabadka leh ee loo yaqaan 'Multi-functional 3D Printer', EcubMaker ayaa lagu ammaanay hal-abuurkeeda iyo tayada heerka.
Tan iyo aasaaskeenii sanadkii 2013, Waxaan horumarinaynaa tayo sare oo tayo sare leh oo daabacaad 3D ah oo daabacan sida Fantasy. Ka dib markii aan ku guuleysanay taxanaha 'Fantasy' ujeedkeenna dambe wuxuu ahaa in aan horumarinno wax dabooli kara baahida loo qabo abuurayaasha jecel in ay yeeshaan mashiin kaas oo qaban kara howlo badan. Iyo waliba keydinta lacagta iyo waqtiga loogu beddelayo mashiinka mashiinka. Ugu dambeyntiina, waan gaarnay bartilmaameedkeenna. In 2019 Waxaan daahfureynaa Printer-kii ugu horreeyay abid dunida ee 4-in-1 3D oo magaciisu yahay: TOYDIY 4-in-1. Kuwaas oo ay ka mid ahaayeen FDM midab keliya, FDM laba midab 3D Daabacaadda, Xardho Laser, CNC xardho oo leh astaamo kale oo xirfad leh.
Waxaan haynaa in kabadan 10 xubnood oo katirsan kooxda R&D. Dhamaantood waxay raadinayaan riyadii ahayd inay u ikhtiraacaan wax macaamiisha caadiga ah macaamiil caadi ah oo dheeri ah. Waxay go'aansadeen inay sameeyaan wax uu isticmaali karo ardayga Kulliyadda. waalid dhexdhexaad ah ama xitaa hobbits hawlgab ah. TOYDIY 4-in-1 waa tusaalaha ugu fiican ee lagu caddeeyo cibaadadooda. Horumarinta xirfadleyda dhammaan-hal barnaamij ayaa caqabad weyn ku noqotay iyaga. Ka dib markii aan soo marnay marxalad adag ayaan sameynay. Waqtigan xaadirka ah TOYDIY waa qalab daabacan oo qalab badan oo 3D ah oo si buuxda u habeysan kaas oo ku guuleysta qalbi badan oo jecel farsamada.
Si loo sii wado tabarucaadan ku saabsan warshadaha daabacaadda 3D iyo horumarkiisa waxaa naloo balan qaaday inaan bixin doono boqolkiiba boqol. Waxaan ka shaqeyneynaa inaan nolosha adeegsadaha aad iyo aad ufududeeyo. Waxaan rabnaa inaad nala timaado oo aad noqoto mid naga mid ah oo aaminsan hal-abuurnimada iyo isbeddelka aadanaha.
Shatiyada iyo Xuquuqda lahaanshaha
Aagga Aqoon isweydaarsiga
Right Xuquuqda daabacaadda - 2014-2020: Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay.